ရေနွေးငွေ့ပေါ်မှာရှိသမျှအောင်မြင်မှုများရရှိရန်မည်သို့ - ရနှေးငှေ့ - 2019
ကွန်ပျူတာနှင့်အတူအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းကျနော်တို့စနစ်ကမအောင်မြင်မှုများအမျိုးမျိုးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကမတူညီတဲ့သဘောသဘာဝသော်လည်း, အမြဲအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်စဉ်ကိုအလုပ်လုပ်ရပ်တန့်။ ဤဆောင်းပါး၌, ကျနော်တို့အမှား 0x80070005 ၏အကြောင်းတရားများဆွေးနွေးရန်နှင့်၎င်း၏ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
အမှား 0x80070005 ဆုံး
ဒါဟာအမှား OS ကို update လုပ်ပေးခြင်းကိုနောက်အော်တိုသို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မည်သည့် application ကိုစတင်သောအခါဒီကုဒ်နဲ့ပေးတဲ့ dialog box ကိုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ အလွန်ကွဲပြားခြားနားထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောအကြောင်းပြချက်များ, "Windows ကို" - က "မတရားစွာကျင့်ကြံပြုမူ" Anti-virus ဆော့ဖ်ဝဲမှစနစ် Partition ပေါ်မှာ data ကိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုရန်။
အကြောင်းပြချက် 1: Anti-Virus
antivirus အစီအစဉ်များကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုစနစ်အတွက်သခင်ခံစားရနှင့်မကြာခဏလုံးဝ Hooligans ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေသက်ဆိုင်သောသူတို့ဝန်ဆောင်မှုကို update သို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ၏သေဒဏ်စီရင် disable လုပ်ဖို့ကွန်ယက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ဆို့စေနိုင်သည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့, firewall ကများနှင့်တက်ကြွသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို disable ဆိုလျှင်, အထုပ်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝအလုပ်၏ကြာချိန်များအတွက် software ကို update ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
antivirus ကို disable လုပ်နည်း
Antivirus ကို Remove လုပ်နည်း
အကြောင်းပြချက် 2: မသန်စွမ်း, VSS
VSS - သင်လက်ရှိမည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကသိမ်းပိုက်ဖြစ်ကြောင်းဖိုင်တွေကို overwrite လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုသောဤ Shadow Copy ဝန်ဆောင်မှု။ ဒါကြောင့်မသန်စွမ်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အခြို့နောက်ခံစစ်ဆင်ရေးစနစ်တကျနေရာအရပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၏အောက်လက်ဝဲထောင့်ရှိမှန်ဘီလူးအိုင်ကွန်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပွင့်လင်းမှုစနစ်ရှာဖွေရေး "Taskbar", တောင်းဆိုချက်ကိုရေးရန် "န်ဆောင်မှုများ" ပွင့်လင်း application ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်ပုံရိပ်မှာပြန်ဆောင်မှုများ၏စာရင်းထဲတွင်ရှာနေပေါ်မှာ click နှိပ်ပြီးတော့ link ကို click နှိပ်ပြီးနေကြတယ် "Run ကို".
ကော်လံအတွက်ပါလျှင် "အခြေအနေ" ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ "Running", စာနယ်ဇင်း "ပြန်လည်စတင်ပါ"ပြီးတော့စနစ် reboot ။
အကြောင်းပြချက် 3: ကို TCP / IP ကိုမအောင်မြင်မှုများ
TCP / IP ကိုသုံးပြီးအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထံမှပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံစစ်ဆင်ရေးအများစုဟာ။ အဆုံးစွန်သောများ၏ပျက်ကွက် 0x80070005 မှားယှငျးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ console ကို command ကို အသုံးပြု. protocol stack ရှိပါတယ် reset ပါလိမ့်မယ်။
ပွေးသှား "Prompt ကိုဆင့်ဆို"။ ဒီတစ်ခုစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်သတိပြုပါ, ဒါမှမဟုတ်ဧည့်ခံကျရှုံးလိမ့်မည်။
Read more: Windows 10 ကိုတစ်ဦး command prompt ကိုဖွင့်လှစ်
write (မိတ္တူများနှင့်ငါးပိ) ကိုအောက်ပါ command:
netsh int ip မှပြန်လည်စတင်
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပါကသင့်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။
အကြောင်းပြချက် 4: စနစ်ဖိုင်တွဲ၏ဂုဏ်တော်
တစ်ဦးချင်းစီ disk ကိုတွင်စနစ်အတွက်အမည်ရှိအထူး folder ကိုလည်းမရှိ "System ကို Volume ကိုပြန်ကြားရေး"ဒေတာ partition ကိုနှင့်ဖိုင်စနစ်၏အချို့ပါဝင်သော။ သူမအနေနဲ့ attribute ကိုရှိပါကဖတ်သာခွင့်ပြု, အ directory ထဲတွင် entry ကိုမလိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များမှားယွင်းမှုတစ်ခု generate ပါလိမ့်မယ်။
စနစ် drive ကိုဖွင့်ပါ, အကြောင်း, အဆိုပါ windose အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "View"အဆိုပါဖွင့်လှစ် "န့်သတ်ချက်များ" နှင့်ဖိုင်တွဲရွေးချယ်မှုများပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
ဤတွင်ပြန် tab ကိုသက်ဝင်စေ "View" နဲ့ (စစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားကိုဖယ်ရှား) ကို option ကို disable, အဖျောက် operating system ကိုဖိုင်တွေကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ ထိုး "Apply" နှင့် OK ကို.
ကျနော်တို့ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် PCM များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုဖွင့ ်. , ကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder ကိုရှာကြ၏။
အနေအထားအနီး "သာလျှင် Read" ဒေါ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ 'check box' ဗလာဖြစ်လာရန်ရှိသည်ပါဘူးသတိပြုပါ။ အဆိုပါစတုရန်းလည်း (။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ) ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဒီတော့ဒီအမှတ်အသားဂုဏ်သတ္တိများပိတ်ပြီးနောက်အလိုအလျှောက်ဖော်ထုတ်သောကွောငျ့။ စာနယ်ဇင်းတက် setting ပြီးနောက် "Apply" နှင့်ပြတင်းပေါက်ပိတ်ပါ။
အကြောင်းပြချက် 5: updates များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲအမှား
အဆိုပါ "လေ" ဟုခေါ်တွင်အခြားအထူး directory ကိုလည်းမရှိ "SoftwareDistribution", ဘယ်အပေါငျးတို့သဒေါင်းလုပ်လုပ် updates များကိုပါရှိသည်။ ဒေါင်းလုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းနှင့်ကူးယူအမှားဖြစ်ပွားခဲ့သည်သို့မဟုတ်အဆက်ဖြုတ်, လျှင်, packages များပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စနစ်ဖိုင်များပြီးသားဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ထဲကအားသာချက်ယူဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်တဲ့ "ထင်" ပါလိမ့်မယ်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်သင့်ကြောင်း folder ကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ယင်းဒင်္-in ကိုဖွင့်လှစ် "န်ဆောင်မှုများ" စနစ်မှတစ်ဆင့်ရှာရန် (အထကျကိုကြည့်ပါ) နှင့်ရပ်တန့် "Update ကိုရေးစင်တာ".
အခုတော့ဖိုင်တွဲကိုသွား "Windows ကို" နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ directory ကိုဖွင့်လှစ်။
အားလုံးရဲ့ contents ကို Select လုပ်ပါကဖျက်ပစ်ပါမည်။
ရလဒ်များ၏အောင်မြင်မှုသန့်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်သေချာစေရန် "စျေးဝယ်လှည်း" ဤအဖိုင်များမှ။ ဒီအထူးဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင် အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အသေးစိတ်: အပျက်အစီးကနေသန့်ရှင်းက Windows 10
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ကျနော်တို့က Windows 10 အတွက် updates များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲတွေနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်း
အကြောင်းပြချက် 6: ခွင့်ပြုချက်များ
ကျနော်တို့အမှားအရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် registry ကိုသော့အချို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြောင့်လက်လှမ်းအခွင့်အရေးမမှန်ကန်ကြောင်း settings ကိုမှဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တိုင်အဲဒီ settings တွေကို configure ရန်ကြိုးစားနေပါကလည်းမအောင်မြင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာတာဝန် command line ကို utility ကို SubInACL နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကစနစ်မတည်ရှိပါဘူးသောကြောင့်, က download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
တရားဝင် site မှ utility ကို Download လုပ်ပါ
အမြစ် directory ထဲတွင် Create ကို C: ဖိုင်တွဲ၏အမည်နှင့်အတူ "SubInACL".
စတင်မျက်နှာပြင်အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ် installer ကို run နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
အဆိုပါ browse button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
drop-down list ကိုမှာ drive ကို select လုပ်ပါ ကို C:သည်ယခင်ကဖန်တီးဖိုင်တွဲများနှင့်ကလစ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ OK ကို.
တပ်ဆင်ကို run ။
ဒီမှာကျနော်တို့က installation ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသွားရှင်းပြရန်လိုအပ်ပေသည်။ အမှန်မှာပိုမိုကျနော်တို့က registry ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအဘို့အ script များရေးသားဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, သူတို့ကဒီလိပ်စာတွက်ဆကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ကအတော်လေးရှည်လျားသည်နှင့်သင်ကအမှားလုပ်အတော်လေးဖြစ်နိုင်ဝင်သောအခါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆဲ utility ကိုခန့်မှန်းရခက်ပြုမူစေခြင်းငှါအောင်, quotation သင်္ကေတအတွက်တန်ဖိုးယူပြီး, ဆိုလိုတာကကွာဟချက်ရှိမတည်ရှိ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ script များသွားပါတပ်ဆင်နားလည်သဘောပေါက်ပါပြီ။
ပုံမှန်စနစ်အ "Notepad" ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ဖွင့်ကြောင့်၌ဤကုဒ်ဒီဝတ်:
= 32 OSBIT Set
"% ProgramFiles (x86)%" set OSBIT = 64 တည်ရှိ IF
set ကို RUNNINGDIR =% ProgramFiles%
% OSBIT% == 64 set ကို RUNNINGDIR =% ProgramFiles (x86)% IF
ကို C: subinacl subinacl.exe / subkeyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion စိတျအပိုငျးအခြေပြု Services" / grant = "NT ဝန်ဆောင်မှု trustedinstaller" = f
@Echo Gotovo ။
menu ကိုသွားပါ "File" နှင့်ကို item ကို select "Save As ကို".
အမျိုးအစားကိုရွေးချယ် "အားလုံးဖိုင်များ"တစ်ဦး extenstion နဲ့ script ကိုမဆို name ကို Give .bat။ အဆင်ပြေရာအရပျထဲမှာသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဤ "အသုတ်ဖိုင်ကို" လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ, သင်ပျက်ကွက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုပြန်လှိမ့်နိုင်အောင်စနစ်တစ်ခုအမှတ် restore အာမခံထားခြင်းနှင့်ဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။
Windows 10 ကိုတစ်ဦး restore point တစ်ခုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
Restore point တစ်ခုမှ Windows 10 ကိုပြန်လှိမ့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အုပ်ချုပ်သူအဖြစ် script ကို run လိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့စက်ကို reboot ။
ဧည့်ခံအောင်မြင်သောမဟုတ်ပါဘူးလျှင်, သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော code ကိုနှင့်အတူအခြား "အသုတ်ဖိုင်ကို" ဖန်တီးလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်အမှတ်အကြောင်းကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။
ကို C: subinacl subinacl.exe / subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE / ထောက်ပံ့ငွေ = အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ = f
ကို C: subinacl subinacl.exe / subkeyreg HKEY_CURRENT_USER / ထောက်ပံ့ငွေ = အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ = f
ကို C: subinacl subinacl.exe / subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT / ထောက်ပံ့ငွေ = အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ = f
ကို C: subinacl subinacl.exe / subdirectories% SystemDrive% / ထောက်ပံ့ငွေ = အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ = f
ကို C: subinacl subinacl.exe / subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE / ထောက်ပံ့ငွေ = စနစ်က = f
ကို C: subinacl subinacl.exe / subkeyreg HKEY_CURRENT_USER / ထောက်ပံ့ငွေ = စနစ်က = f
ကို C: subinacl subinacl.exe / subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT / ထောက်ပံ့ငွေ = စနစ်က = f
ကို C: subinacl subinacl.exe / subdirectories% SystemDrive% / ထောက်ပံ့ငွေ = စနစ်က = f
မှတ်စု: ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်လှမ်းအမှားတွေ့မြင်ကမူရင်း Registry setting များကိုပြီးသားမှန်ကန်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်ဆုံးမခြင်း၏အခြားနည်းလမ်းများဆီသို့ဦးတည်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သောကြောင်းကိုဆိုလိုသည် "Prompt ကိုဆင့်ဆို" မှာ scripts တွေရဲ့ကွပ်မျက်စဉ်အတွင်းပါ။
အကြောင်းပြချက် 7: ပျက်ဆီးနေသော system files ကို
0x80070005 အမှားလည်းများကြောင့်အစီအစဉ်များကိုအပြေးအဘို့လုပ်ငန်းစဉ် update များသို့မဟုတ်ပစ်လွှတ်ပတ်ဝန်းကျင်၏ပုံမှန်စီးဆင်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်နေသောစနစ်အဖိုင်များပျက်စီးခြင်းမှပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, သင်နှစ်ခုသာ command-line utility ကိုသုံးပြီးသူတို့ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: မှာ Windows 10 မှာ System ကိုဖိုင်များ Restore
အကြောင်းပြချက် 8: ဗိုင်းရပ်စ်
malware windose running ကို PC ပိုင်ရှင်များ၏ထာဝရပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားပိုးမွှားစနစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေလုယူသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့စနစ်ဖိုင်များ, registry ကို setting များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အထက်ပါနည်းလမ်းများတစ်ဦးအပြုသဘောရလဒ်ဆောင်ကြဉ်းမပြုခဲ့လျှင်သင်ကို malware detection စနစ်အဘို့သင့်ကို PC စစ်ဆေးသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်လိုအပ်သည်။
အကြောင်းပြချက် 9: သင့် hard disk ပေါ်မှအမှားများ
သင်တို့ဆီသို့အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့အရာစနစ် drive ကိုပေါ်နိုင်သမျှအမှားများကိုဖြစ်ပါတယ်။ windose ခုနှစ်တွင်စမ်းသပ် In-built နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများကုစားခဲ့သည်။ သို့သော်သင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအထူးဒီအစီအစဉ်အတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: မှာ Windows 10 မှာ hard disk ကိုရောဂါရှာဖွေရေး Perform
အမှား 0x80070005 များအတွက်ပြင်းထန်သောဆေးတစ်လက်စနစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြည့်စုံပြန်လည် install ပြုလုပ် restore လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းအခြေအနေမှတစ်ဦးသည် Windows 10 Restoring
စက်ရုံအခွအေနေမှ Windows 10 ကိုပြန်လာ
တုတ်သို့မဟုတ် disk ကိုနှင့်အတူ 10 windose install လုပ်နည်း
အစားခက်ခဲကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအပေါ်အကြံဉာဏ်ကိုဤပြဿနာကို Give, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှု minimize အနည်းငယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးအပိုင်းကနေလေ့လာသင်ယူပါကသင့်ကွန်ပျူတာကိုကူးစက်ရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ဒုတိယအနေ hack software ကို၎င်း၏ယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားအထူးသဖြင့်သူတို့အားအသုံးပြုနိုင်သည်, သို့မဟုတ်ကွန်ယက်အပြင်အဆင်များနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးက system ကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့မကြိုးစားကြည့်ပါ။ လုံးဝလိုအပ်သောမဟုတ်လျှင်, တတိယ, နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ပဏာမလေ့လာမှုစနစ်ဖိုလ်ဒါ, registry ကိုအပြင်အဆင်များ, နှင့် "Windows ကို" ၏အပြင်အဆင်များရဲ့ contents မပြောင်းကြဘူး။
Windows7hibernation ဖွင့်ပေးခြင်း
WebDAV-client ကိုမှတဆင့် Yandex Disk ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း
မူလအစကို update လုပ်နည်း
ငါက Windows ပေါ်မှာ DirectX ကို၏ဗားရှင်းကိုဘယ်လိုသိသလဲ
Wondershare ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူအနေဖြင့်ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူဆော့ဖ်ဝဲပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရေးသားခြင်းနေစဉ်, သူတို့တူညီတဲ့ site ကိုတစ်ဦးအခမဲ့ video converter ကိုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲငင်သူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုမြင်နောက်ပိုင်းတွင် Download ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ရှိသည်။ ဒါဟာသင်ပင်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဘို့ converter ကိုလည်းကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများအပြင်ပါဝင်သောအခမဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတဦးဟုပြောနိုင်ပါသည်, program ကိုတော်တော်လေးကောင်းသောကြောင်းထွက်လှည့်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Windows 10 ကိုအတွက်အသံသည်ပြဿနာများနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်
Yota modem စွမ်းဆောင်ရည် Restoring